people Nepal » आन्दोलनको तयारीमा राजपा : किन रिसायो एक्कासि ? आन्दोलनको तयारीमा राजपा : किन रिसायो एक्कासि ? – people Nepal
आन्दोलनको तयारीमा राजपा : किन रिसायो एक्कासि ?
जेठ २७, काठमाडौं – राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल १४ असारको स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्न आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारीमा लागेको छ । केही दिनअघिसम्म दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्न सहमत रहेको राजपा एक्कासि पुरानै मागमा अडान राख्न थालेको छ । उसले आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्न छलफलसमेत सुरु गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले आयोगले जारी गरेको सूचनाको कुनै अर्थ नभएको बताए । ‘नजाने गाउँको बाटो नसोध्नु भन्छन्, हामीलाई सरोकार नभएको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया आवश्यक छैन,’ महतोले भने । उनका अनुसार राजपासँग एकता गरेका दलले उम्मेदवार मनोनयनमा आवश्यक पर्ने पार्टीको आधिकारिक हस्ताक्षर बुझाउने छैनन् ।
राजपाका अर्का नेता शरत्सिंह भण्डारीले निर्वाचन आयोगले राजपाका लागि आधिकारिक हस्ताक्षर माग नगरेको र एकता भइसकेका पुराना दलको हस्ताक्षर माग गरेकाले त्यो सम्भव नभएको दाबी गरे । ‘राजपाको निर्वाचन चिह्न के हो भन्ने पनि अहिलेसम्म प्रस्ट भएको छैन, अनि कसरी निर्वाचन जान सकिन्छ ?’ भण्डारीले भने ।